अनुदानको चामलमा चरम अनियमितता, ३७ सय पर्नेलाई १५ हजार ! - Everest Dainik - News from Nepal
अनुदानको चामलमा चरम अनियमितता, ३७ सय पर्नेलाई १५ हजार !
बझाङ, जेठ २२ । जिल्लाको दुर्गम साईपाल गाउँपालिकामा खाद्य संस्थाले चामललगायत खाद्यन्न विक्री वितरणमा अनियमितता गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारबाट ढुवानी अनुदान लिएर भित्र्याईएको खाद्यान्न संस्थाले काँडा वितरण केन्द्रले स्थानीय व्यापारीलाई बेचेको उनीहरुको आरोप छ ।
हाम्रो लागि भनेर ल्याएको सबै चामल चैनपुरमै व्यापारीलाई बेच्ने गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस बझाङमा जिप दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु
चामल लिन धुलीबाट एक दिन हिँडेर काँडा वितरण केन्द्र पुगेकी केउडी बोहराले भनिन् चामलका लागि तीन दिनसम्म काँडामै बस्नुपर्यो ।
त्यस्तै, खाद्य संस्थानले वितरण गरेको चामल तथा पिठो मुल्य पनि तोकेभन्दा बढी असुल गरिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
संस्थानले पिठोमा ५ केजी २१०, अरुवा मसिनो चामल २५ केजीको प्रतिबोरा १ हजार ६ सय, बंगलादेशी उसिना चामल ४० केजीको प्रतिवोरा १ हजार ५१० मुल्य तोकेको थियो । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
ट्याग्स: Anudan chamal, bajhang, Saipal gaunpalika, Usinaa chamal